मिक्सप्लोरर ठूलो सम्भावनाको साथ एक फाईल अन्वेषक हो Androidsis
मिक्सप्लोरर एक नि: शुल्क फाइल एक्सप्लोरर हो जुनसँग बिभिन्न सुविधाहरू छन्
ती सबै नकारात्मक समीक्षाको साथ ES फाइल एक्सप्लोररमा त्यो उच्च प्रचारित अपडेट पछि जारी गरिएको छ, धेरै प्रयोगकर्ताहरू छन् नयाँ विकल्पहरूको खोजी गर्दै एन्ड्रोइड ज्ञात हुन थाले पछि सबैभन्दा मनपर्ने को एक अनुप्रयोग द्वारा प्रस्ताव गरेको छ। यो ठूलो लाजको कुरा हो कि यो नयाँ हातहरूमा सरेको अनुप्रयोगसँग भयो र यो ती हुन् जसले तपाईंलाई प्राय: नि: शुल्क संस्करणको साथ प्रीमियम संस्करण किन्न बाध्य पार्छन् विज्ञापन मार्केटिंग हो। तपाईं यसलाई लगभग स्थापना हटाउन चाहनुहुन्छ। ती व्यवसाय मोडेलहरू बुझ्दैनन्, जब त्यस्ता अनुप्रयोगहरू छन् जुन उच्च-गुणवत्ता निःशुल्क संस्करणहरू र प्रीमियम विकल्पहरू नोभा लन्चर प्रस्ताव गर्दछ।
ती सम्भावित विकल्पहरू मध्ये एक मीक्सपलोरर हो र यसमा ती सबै सुविधाहरू छन् जुन तपाईं उच्च-गुणवत्ताको फाईल अन्वेषकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी भएको एक अनुप्रयोगको बारेमा कुरा गर्दैछौं स्वतन्त्र विकासकर्ताद्वारा सिर्जना गरिएको र यो एक ठूलो कम्पनी वा विकासकर्ताहरूको एक महत्वाकांक्षी टोलीमा निर्भर हुँदैन बेनिफिटहरूको फाइदा लिन रणनीति खोज्दै र मुद्रीकरण एप्लिकेसन जे भए पनि। MiXplorer एक नि: शुल्क अनुप्रयोग हो र अरू अनुप्रयोगहरूको तुलनामा लगभग कुनै पनि भन्नको लागि एकदम थोरै प्रचार छ। यसको मुख्य सुविधाहरू मध्ये, हामी हाईलाईट गर्न सक्दछौं कि यो मटेरियल डिजाइनको साथ एक उत्तम डिजाइन छ र यो एन्ड्रोइड २.० वा उच्चको साथ उपकरणहरूमा काम गर्दछ। यो भर्खरै अन्तिम तीन दिन पहिले अद्यावधिक गरिएको थियो, त्यसकारण हामी यसलाई जानौं।
एक उच्च-गुणवत्ता ब्राउजर
La सुविधाहरूको सूची एकदम लामो छ, तर हामी तिनीहरूलाई सूचीबद्ध गर्दै जानेछौं ताकि मिक्सप्लररले हामीलाई के प्रस्ताव गर्न सक्दछ भनेर जान्नको लागि:
अनुकूलन विकल्पहरू जुन तपाईंलाई कुनै र choose छान्न अनुमति दिन्छ
ट्याबहरू र द्वारा असीमित ब्राउजि। ल्यान्डस्केप मोडमा डुअल प्यानल ड्र्याग र ड्रप कार्यहरूको लागि बिभिन्न विन्डोजहरूको बीचमा
प्रतिलिपि, सार्नुहोस् र टाँस्नुहोस् को साथ कार्यहरू सिर्जना गर्नुहोस्
बिभिन्न दृश्य मोड र विकल्पहरू प्रत्येक फोल्डर क्रमबद्ध गर्न
लोकप्रिय फाइल प्रकारहरूको साथ अनुकूलन शर्टकट ड्रअर
कार्यहरूको लागि उन्नत खोजी
सबै प्राथमिकताहरू निर्यात / आयात गर्नुहोस्, बुकमार्कहरू र अनुकूलन थिमहरू
तपाईंको नेटवर्क भण्डारणबाट ZIP फाइलहरू खोल्नुहोस्
१ cloud क्लाउड भण्डारण प्रदायकको साथ एकीकृत र समर्थन धेरैलाई प्रदान गरिन्छ जस्तै Yandex.ru, OwnCloud, 4Shared, MyDrive.ch, DriveHQ, Cloudme र CloudSafe
रूट पहुँच उन्नत अपरेशनहरूको लागि
क्षमताको साथ प्रयोगकर्ता र प्रणाली द्वारा अनुप्रयोगको व्यवस्थापन एउटा सुरक्षा प्रतिलिपि बनाउनुहोस् रूट उपकरणहरूको लागि
सबै भण्डारण प्रकारहरूको लागि एन्फिएस मात्रा
एस्क्रिप्ट फाइल ईन्क्रिप्शन
FTP / HTTP सर्वर
MP3 ट्याग सम्पादक
छवि दर्शक समावेश छ GIF एनिमेसनको लागि समर्थनको साथ
उन्नत पाठ सम्पादक
साम्बा, FTP, SFTP, WEBDAV र ब्लुटुथ
तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ योसँग विशेषताहरूको राम्रो स्ट्रिंग रहेको छ र अपाic्ग मात्र यही हो गुगल प्ले स्टोरमा उपलब्ध छैन। तपाईं यसको डाउनलोड पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ यस लिङ्कबाट र XDA फोरममा प्रविष्टि पहुँच गर्नुहोस् जहाँ विकासकर्ताले प्राय: समाचारमा टिप्पणी गर्दछन् र नयाँ संस्करणहरू थप्दछन्।
अनुप्रयोग हो धेरै राम्रो एक मटेरियल डिजाइन संग डिजाइन धेरै राम्रोसँग कार्यान्वयन गरियो। यो एक न्यूनतम स्पर्श छ कि यो एक परिभाषा गर्दछ कि एक धेरै राम्रो भावना छोडेर। विकासकर्ताले समय-समयमा समाचार पनि समावेश गर्दछ र, यसलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क अपडेट गर्न, सत्य यो हो कि यो यसको लागि लायक हो। भर्खरका अपडेटहरूमा, बगहरू ठीक गर्ने बाहेक, यसले छवि दर्शकको लागि मेनू विकल्पका रूपमा केही नयाँ सुविधाहरू पनि थप्यो, ईबुकका लागि थम्बनेल छविहरू, र ebook पाठकमा छवि र HTML निर्यात गर्ने क्षमता।
जबकि पहिले यो लाग्न सक्छ कि यो स्प्यानिशमा अनुवाद गरिएको छैन, अ default्ग्रेजी पूर्वनिर्धारित रूपमा, सेटिंग्सबाट तपाईं भाषा छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र स्पेनिश APK को लागी हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं सेटिंग्समा फिर्ता जानुहोस् र स्पेनिश चयन गर्नुहोस्।
La एक्सडीए फोरममा प्रविष्टि र फेरि लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्.
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू » मिक्सप्लोरर एक नि: शुल्क फाइल एक्सप्लोरर हो जुनसँग बिभिन्न सुविधाहरू छन्
Hode Dorico भन्यो
तर यहाँ के कुरा हुँदैछ? MiXplorer बाट? ES फाइल एक्सप्लोररबाट? किनकि यो थाकेको छ। केहि मैले यस फिक्सेशनको साथ छुटेको छु। दस सेन्ट (हो € ०.०१) ले मलाई लागत दियो र म त्यसलाई परिवर्तन गर्दिन। यो मानिसहरूलाई Androisis नपढ्न प्रोत्साहित गर्नु जस्तो हो किनभने म तपाईंसँग सहमत छैन। मानिसमा आउनुहोस्। Rigor ...
Hode Dorico लाई जवाफ दिनुहोस्
उत्तम फाईल अन्वेषक, टाढाबाट!
एलजीले एलटीई र युट्युब लाइभको समर्थनको साथ कार्य सीएएमको घोषणा गर्‍यो